खेलाडीमा अनुशासन हुनु पर्छ : जीतबहादुर केसी (पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता) | Kendrabindu Nepal Online News
खेलाडीमा अनुशासन हुनु पर्छ : जीतबहादुर केसी (पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता)
४ पुष २०७६, शुक्रबार १८:२१
जीतबहादुर केसी, यो नाम तपाईंहरु माझ त्यति चर्चित नहोला तर उनले देशको लागि गरेको योगदान वर्णन गर्न सकिन्न । सन् १९७३ मा मनालीमा भएको एसियन च्यामपियनसिपमा जीतबहादुरले कास्य पदक जितेका थिए । जुन नेपालको लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक थियो । ७२ वर्षिय जीतबहादुर हाल दशरथ रंगशालामा इन्चार्जको रुपमा कार्यरत छन् । केन्द्रबिन्दुले यसपटक केसीसँग ५ प्रश्न गरेको छ । प्रस्तुत छ केन्द्रबिन्दुकर्मी प्रसुन संग्रौलाले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
नेपालमा सम्पन्न भएको १३ औं संस्करणको सागमा नेपालले ५१ स्वर्ण पदक जितेको छ, कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ ?
यो नेपालको खेलकुद क्षेत्रमा स्वर्ण इतिहास हो । निकै खुसी छु । यस्तो सफलता आगामी दिनमा पनि हासिल गर्न गराउन खेलकुद क्षेत्रलाई विशेष रुपमा व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्छ । विगतको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको छ । पहिले हाम्रो पालामा खान लाउनको केहि सुविधा हुदैनथ्यो तर अहिले त्यस्तो समय रहेन । तर अझै पनि राज्यको तर्फवाट खेलाडीहरुलाई दिनुपर्ने सेवा सुविधाहरु भने पुरा दिएको छैन ।
तपाईं सन् १९७३ को एशियन च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय पदक दिलाउनु भयो । त्यो दिन कसरी सम्झिरहनु भएको छ ?
त्यो दिन म कहिल्यै बिर्सन सक्दिनँ । अहिले पनि त्यो दिन सम्झँदा निकै आनन्द लाग्छ । जीवनको खुसीको पल थियो त्यो । त्यति धेरै चुनौतीहरुको बाबजुद पनि मुलुकलाई अन्तर्र्राष्ट्रिय पदक दिलाउन सफल भएको थिएँ । निकै दुःख थियो त्यतिबेला खेलाडीलाई । लाउनलाई राम्रो लुगा हुदैनथ्यो । खाली खट्टा दौडन पथ्र्यो । कयांै पटक १० ओटै औंलाबाट रगत बगेको थियो । खाने कुराहरु अर्थात डाइटहरु केहि हुदैनथ्यो । त्यो अवस्थामा पनि मुलुकलाई पदक दिलाउन सफल भइयो ।
त्यो पदक अहिले कहाँ छ नि ?
दुर्भाग्यबस त्यो पदक हरायो । त्यतिबेला म लैनचौरमा कोठाभाडा लिएर बसेको थिएँ । प्रहरीलाई रिपोर्ट नि गरेको थिएँ तर पनि त्यसको केहि पत्तो लागेन ।
खेल क्षेत्रमा पनि राजनीति हाबि भएको छ भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ नि ?
हो छ । विगत लामो समयदेखि खेलकुद क्षेत्रमा राजनितीकरण भैरहेको छ । प्रशिक्षण, खेलाडी र रेफ्री सबैजना राजनितीकरणको शिकार भएका छन् । आफ्नो मान्छे भर्ति गर्न राजनितीकरण गरिन्छ । मेरो पालामा पनि राजनितीकरण थियो । राजनितिकरणकै कारण मैले पनि धेरै अप्ठेरोहरु खेप्नु परेको थियो ।
खेलाडी बन्न चाहाने किशोरपुस्तालाई के सन्देश दिनुहुन्छ ?
आउनुस् मिहेनत गर्नुस्, इमान्दार बन्नुुस् । सफल हुनुस् । खेलाडीहरुको मुल मन्त्र भनेको नै अनुशासन हो । खेलाडीमा अनुशासन भयो भने मात्र ऊ एक न एक दिन पक्कै सफल हुन्छ । खेलकुद राष्ट्रको गहना भएकोले कसैले पनि यस्लाई हेलचेक्राइँ गर्नु हुन्न ।
५ प्रश्न, जीतबहादुर केसी
Prevकालिका र जनसेवी लघुवित्तबीच एकिकृत कारोवार गर्न स्वीकृत
नारायणगोपाल युवा सङ्गीत पुरस्कार अविरल र मीनालाईNext
नेपालका पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता केसीलाई कोरोना